I-R & D isiza ukukhetha abakhiqizi baseChina bavelele
Ngokulungiswa kwezindaba zokuhlala ezinjenge-Artefact Accord futhi ukufinyelela ukuncintisana okuzokwamukela konke, izinkampani kufanele zibe nazo ngobuso ngokumelene nokuhlaziywa kanye ne-DE ...
Ngokulungiswa kwezindaba zokuhlala ezinjenge-Artefact Accord futhi ukufinyelela ukuncintisana konke, izinkampani kufanele zibe nazo-ubuso ngokumelene nokuhlaziywa kanye nokuthuthukiswa kwezinto ezintsha ezingacelwa nge-Artefact Alterse Northerse nePoverfolio Diversification.
Izinkampani eziningi zamukela zaqala ukuzokwamukela ukwabiwa kwe-cogent kokuthengiswa kwawo kokuzalwa okuphikisana nentuthuko ye-artefact. Ukutshalwa kwezimali kwezinkampani ezishintshana kuleyo mpahla kuvela kwa-Atomic 10 kuye phezulu njengamaphesenti ayi-16, ngamaqembu okuhlaziya kanye nezinto ezenzelwe ukwengeza isenzo kanye.
Ukunikezwa kwe-artefact okuthuthukisiwe
Kunezindlela eziguquguqukayo eziguquliwe ahlanganisiwe kungavumela ukufeza izindatshana zazo nokuzikhandla okuzwakalayo kwabanye futhi kufezeke ukuthi kuthambekeke emakethe yokuvelela ethile. Imikhiqizo ye-Aplages.
Ezinye izinkampani zizuza ikhono labo kanye nokujwayelana kwazo ezingxenyeni eziqinisekisayo ze-bazaar ukuze zamukele izindatshana ezakhiwe ngokwezifiso nezixazululo. Izinkampani zamaShayina ezikhuthazayo manje seziphila ukugxila kwazo ezingena zodwa izindatshana ezithinta izisombululo.
Amagama okusesha athandwayo:Ikhamera ye-Outdoor enhle kakhuluIkhamera yentengo enhle ye-IPIkhamera ye-WDRAP
PHAMBI Ubuchwepheshe Bokuqashelwa Kwezinhliziyo Zekhamera nobuchwepheshe obukhulu bedatha